FSX - FSX Wiki puzzle.svg
a350 lalao maimaim-poana
fanontaniana a350 lalao maimaim-poana
1 taona 3 volana lasa izay #1114 by Yegarff
Hey any, manontany tena fotsiny hoe mety hisy hieritreretana momba io olana io. Nandefasako ny a350 ary rehefa mandeha aho dia milalao ny lalao. Nesoriko izany ary naveriko indray ary mbola mafana ihany. Ny eritreritra rehetra?
Fotoana mamorona pejy: 0.460 segondra